घर / नल गाईड / डेल्टा नल समीक्षाहरू: २०२१ डेल्टा किचन फ्याट्सका लागि गाईड खरीद
2021 / 05 / 08 वर्गीकरणनल गाईड 744 0
डेल्टा नल नल नवीनता को लागी सधैं अगाडि हुन्छ। तिनीहरूले टच जस्ता टेक्नोलोजीहरू विकास गरेका छन्2O, एक टच सेन्सर जसले नल खोल्छ र बन्द गर्दछ। तिनीहरू म्याग्नाइट कागजात पछाडि जीनियसहरू पनि हुन्, जसले नल टाउको सुरक्षित गर्न म्याग्नेट प्रयोग गर्दछ जब तपाईंले विस्तारित नली प्रयोग गर्नुहुन्न।
डेल्टा नल शीर्ष भान्साको नल
तपाईंको भान्छाघर खाना खाने सँगै टास गर्न ठाउँ भन्दा बढी छ। यो तपाईंको घरमा जम्मा गर्ने ठाउँ हो, र धेरै परिवारहरूको लागि यो न्यानोपन र आनन्दको स्रोत हो। सहि भान्साको नलले तपाईंको चाहिएको दृश्य पूर्ण गर्दछ तपाईंको खाना पकाउन र सफाई कार्य सजिलो गर्दा।
तपाइँको भान्साको लागि त्यो सही छ भनेर फेला पार्नको लागि हाम्रो मनपर्ने डेल्टा किचन फ्याकहरूको लागि यी डेल्टा नल समीक्षाहरू जाँच गर्नुहोस्।
१. एस्सा किचेनको नलमा पुल डाउन गर्नुहोस्
सहि भान्साको नललाई तपाईंको बजेटमा उडान नदिई सबै सुविधाहरू चाहिन्छ। मान र उपयोगी सुविधाहरू बीचको यसको सन्तुलनको लागि Essa पुल डाउन किचन नल 9113-AR-DST हाम्रो भान्छाको नलहरूको सूचीमा शीर्ष स्थान स्कोर गर्दछ।
स्वामित्व हीरा भल्भ
पुल-डाउन नलीको लागि म्याग्नाटाइट डकि।
स्प्रे र स्ट्रिम प्रकार्यहरू
InnoFlex PEX एकीकृत आपूर्ति लाइनहरू सामेल छन्
डेल्टा एस्सा पुल डाउन किचनको नलको सीधा सुविधाहरू भएको सरल डिजाइन छ, तर यो क्लासिक हो जुन कुनै पनि भान्छामा राम्रोसँग फिट हुन्छ। न्यूनतम नलको अपरेशनको लागि एकल ह्याण्डलको साथ सादा नरम वक्र हुन्छ, जबकि पुल-डाउन नलीले तपाईंलाई सबै लचिलोपन दिन्छ।
घरमालिकका बीच मनपर्ने एक टच-क्लीन स्प्रे प्वालहरू हुन्। अब टुथब्रश वा टुथपिक्स प्रयोग गरी तपाईको नलको प्वालहरू सफा गर्ने प्रयास गर्न को लागी गरीरहेछ, विशेष गरी यदि तपाईंको पानी खनिज भण्डारको पछाडि छोडिन्छ।
२. लेलन्ड पुल डाउन नल
के हुन्छ यदि तपाईंलाई एस्सा नलको प्रकार्यहरू मनपर्दछ तर तपाईं आफ्नो नल अधिक स्टाइलिश, परम्परागत सुविधा बनाउन चाहनुहुन्छ? को Leland पुल तल नल 9178-AR-DST पुल उत्तम विकल्प हो।
शिल्डस्प्रे ™ टेक्नोलोजी
स्प्रे, स्ट्रिम, र शिल्डस्प्रे ™ प्रकार्यहरू
लेल्यान्डले एस्सा जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्दछ तर शिल्डस्प्रे ™ टेक्नोलोजीको थपको साथ। यस नवीन डेल्टा सिर्जनाले तपाईंलाई शक्तिशाली स्ट्रीम दिन्छ जब स्प्लाश न्यूनतम पार्दै। ओवरस्प्रे लाई पछि सफा नगरिकन भाँडा माझ्ने कल्पना गर्नुहोस्।
जबकि मानक लेल्याण्ड यी सबै शीर्ष सुविधाहरूको साथ आउँदछ, तपाईंसँग अन्य उन्नत विकल्पहरूको साथ एक लेल्याण्ड नलको विकल्प पनि हुन्छ। टचको साथ मोडेलको प्रयास गर्नुहोस्2हे टच नियन्त्रणहरू वा भ्वाईसआईक्यूको साथ सब भन्दा उन्नत मोडेलमा लगानी गर्नुहोस्, तपाईंलाई अलेक्सा वा गुगल जस्ता तपाईंको भ्वाइस सहायकहरूसँग नल नियन्त्रण गर्न अनुमति दिदै।
Tr. ट्रिन्सिक एकल-ह्यान्डल नल
जोको लागि उनीहरूको नल, को लागि अधिक समकालीन देखिन्छन्ट्रिन्सिक एकल-ह्यान्डल नल 9159-AR-D एक राम्रो विकल्प हो। यसमा कुनै सुविधाहरू र कुनै डेल्टा नलको डिक स्टाइलको साथ विश्वसनीयता छ।
पाँच समाप्त विकल्पहरू
सुविधाहरू र शैली ट्रिन्सिक र एस्सा बीच समान छन्। यद्यपि ट्रिन्सिकको उच्च मूल्य ट्याग छ। केहि फिनिशहरू अरूहरू भन्दा धेरै मूल्यवान हुन्छन्, जबकि सहि छनौटले तपाईंलाई दशकौंसम्म सेटअप गर्न सक्दछ।
यस सूचीका अन्य मोडेलहरू जस्तै, ट्रिन्सिकले तपाईंको नलमा चुहावट हुने जोखिम कम गर्न डेल्टाको उन्नत इनोफ्लेक्स PEX प्रविधि प्रयोग गर्दछ। डेल्टाको डायमंड सील भल्भको साथ जोडा मिलाइएको छ, यसले लामो समयसम्म चल्ने नलको लागि बनाउँछ जुन तपाईंको भान्छालाई चुहावट र पानी क्षतिबाट बचाउँछ।
L. लेन्टा एकल-ह्यान्डल नल
जब तपाईं नलहरूको लागि किनमेल गर्नुहुन्छ, शैली तपाईंको आँखा समात्ने पहिलो चीज हुनेछ। को लेन्टा एकल-ह्यान्डल नल 19802Z-CZ-DST तपाइँको ध्यान यसको अद्वितीय वर्ग आधारको साथ कब्जा गर्न निश्चित छ, तर यो प्रक्रियामा गुणवत्ता मा स्किप छैन।
लेन्टामा सबै क्लासिक सुविधाहरू छन् जुन तपाईंले डेल्टा नलमा आशा गर्नुहुन्छ: प्रोप्राइटरी उच्च-गुणस्तरको भल्भ, InnoFlex PEX आपूर्ति लाइनहरू, र म्याग्नाइट कागजात। लोकप्रिय शिल्डस्प्रे ™ टेक्नोलोजी र लचिलो नलीले बहुमुखी बनाउँछ कुनै पनि काम बारे मात्र ह्यान्डल गर्न।
विचार गर्नको लागि एउटा भिन्नता यो छ कि यो सूचीमा अन्य अन्य नलहरू भन्दा फरक, लेन्टाले भ्वाइसआईक्यू समावेश गर्ने विकल्प प्रस्ताव गर्दैन।
K. Kate एकल-ह्याण्डल किचन सिंक नल
यदि तपाईं न्यूनतम डिजाइनको साथ नल चाहानुहुन्छ तर त्यो तपाईंको ठूलो भान्छाको अनुपातमा छ भने, तपाईंले उत्तम फिट पाउनुभयो Kate एकल-ह्याण्डल किचन सिंक नल। यो एक नवीन र अद्वितीय डिजाइन हो जसले तपाईंको भान्साको घर चमक बनाउँदछ।
मिलान साबुन वितरक
MagnaTite डॉकिंगको साथ पुल-डाउन स्प्रेयर
टच क्लिन स्प्रे प्वालहरू
डेल्टाको स्वामित्व डायमंड सील टेक्नोलोजी
लाइफटाइम सीमित वारेन्टी
क्रोम वा स्टेनलेस फिनिशमा उपलब्ध
Kate को सब भन्दा विशिष्ट सुविधा यसको अनौंठो डिजाईन हो। यो तीन होल स्थापना फिट गर्दछ तर नल र दुई ह्यान्डलहरूको साथ होईन। यसले दाँयामा एकल लीभर ह्यान्डलको साथ दायाँपट्टि नलको सुविधा दिन्छ र दुबै तापक्रम र पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्नका साथै बायाँपट्टि साबुन वितरण गर्ने उपकरणसँगै।
नल आफैंमा एक चिकना, न्यूनतम, आधुनिक लुक छ जबकि ह्याण्डल र साबुन डिस्पेंसरले परम्परागत शैलीको एक डोज थप गर्दछ। यसले कुनै पनि घरको लागि पर्याप्त बहुमुखी बनाउँछ।
E. एस्सा एकल-ह्यान्डल बार-तयारी नल
एस्सा: डेल्टा नल उनीहरूले यसलाई दुई पटक बनाए। यो एस्सा एकल-ह्यान्डल बार-तयारी नल 9913-AR-DST एस्सा मोडेल जस्तै छ जुन हामीले हाम्रो सूचीमा पहिलो स्थानमा राख्यौं, तर थोरै कम मूल्य ट्यागको साथ।
दुई एस्सा मोडेलहरू समान छन् तर मुख्य भिन्नताका साथ: यो सानो छ। एस्सा पुल-डाउन नलको टाउको आधारबाट inches इन्च भन्दा बाहिर पुगेको छ, जबकि यस मोडेलको पहुँच सात इन्च भन्दा कम छ। यो सानो मोडेल १ 14.5 इन्च एस्सा पुल-डाउन नलको तुलनामा १ 15.75..XNUMX इन्च अग्लो छ।
दुबै आकारका उनीहरूका पक्ष र विपक्षहरू छन्। ठूलो नलले तपाईलाई ठूला वस्तुहरू सफा गर्नको लागि सिंक खाली ठाउँ दिनेछ। एकै समयमा, सबै भान्सामा ठूलो नलको लागि ठाउँ हुँदैन किनभने त्यहाँ क्याबिनेटहरू, तखताहरू, वा सि items्क माथि स्थापित अन्य आईटमहरू छन्। यो तपाईको ठाउँ मापन गर्ने र तपाई के समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे सबै कुरा हो।
Wind. विन्डमिअर दुई-ह्यान्डल नल
यदि तपाईंसँग राम्रो र विलासी परम्परागत भान्छाकोठा छ भने, यो केवल उचित हो कि तपाईंको नलसँग मिल्नु पर्छ। को भव्य लालित्य Windemere दुई-ह्यान्डल नल आदर्श फिट हो।
गहिरो चाप 360 XNUMX०-डिग्री स्विभलिंग मोशनको साथ
क्रोम, तेल काँसा, र स्टेनलेस समाप्तमा उपलब्ध छन्
विन्डिमियर नलको वास्तवमै भव्य दृष्टिकोण छ। यसको उच्च चाप, फोर-होल कन्फिगरेसन, र पर्याप्त आधारको साथ, यो ठूलो, लक्जरी भान्छाको लागि उत्तम अनुपात छ। सबै कि लालित्य एक आश्चर्यजनक किफायती मूल्य मा आउँछ, यद्यपि।
विन्डिमियरको आकारले मात्र यसलाई आनुपातिक फिट बनाउँदैन, तर यसले सफाई पनि सजिलो बनाउँछ। एक अभिलेख स्पउट संग जुन एक प्रभावशाली गहिरो पहुँच छ, यो ठूलो, कडा भाँडो सफाको लागि उत्तम छ।
Jun. जंक्शन किचन नल
आधुनिक आन्तरिक डिजाइन को एक हिलमार्क सफा, तीखो रेखा हो। यो स्पष्ट थियो कि यो आधारको लागि थियो जंक्शन किचन नल, डेल्टा सबैभन्दा अनौंठो र तेजस्वी भान्सा faucets को एक।
स्लिक आधुनिक डिजाइन
एक प्वाल स्थापना
चुम्बकीय पुल-डाउन स्प्रेयर
घर मालिकहरू जो एक सुव्यवस्थित, चिकना डिजाईन चाहान्छन् कि उनीहरूको नललाई Guggenheim बाट प्रदर्शन जस्तो देखिन्छ, जंक्शन मोडेल उत्तम विकल्प हो। अवश्य पनि, अल्ट्रा-आधुनिक लुक यस नलको सम्पत्ति होइन। यसको कार्यक्षमता प्रभावशाली रूपमा बहुमुखी पनि छ।
यो नल १ 15 इन्च भन्दा बढि माथि पुग्छ, यसले ठूला भाँडा र भाँडोका लागि आदर्श बनाउँछ। जंक्शन दुबै एक-होल र तीन-होल कन्फिगरेसनको लागि पनि उपयोगी छ, किनकि यस नललाई मात्र एउटा प्वाल चाहिन्छ तर यदि आवश्यक छ भने अतिरिक्त प्वालहरू ढाक्न वैकल्पिक डेक प्लेट प्रदान गर्दछ।
C। चर्मिन एकल-ह्यान्डल नल
यो चर्मिन एकल-ह्यान्डल नल डेल्टाको नयाँ faucets मध्ये एक हो, र यसले उपभोक्ताको फाइदाको लागि काम गर्दछ। यसको सुन्दर रूप को साथसाथै, यो नल आधुनिक र सुविधाजनक सुविधाहरूले भरिएको छ।
चर्मिने तपाईको भान्साको र अधिक सुविधाजनक बनाउन उच्च टेक तरीका हो। टच एक्टिभसनले तपाईंलाई नलमा गडबड वा ब्याक्टेरियाले भरिएको अवशेषहरू हटाउन अनुमति दिन्छ। यसैबीच, देखिने तापक्रम गेजले तपाईंलाई नलको तापक्रम देखाउँदछ ताकि तपाईं आफूलाई न्यानो पानीमा जलाउनु हुन्न।
यसको विशेष गरी उच्च टाउकोको साथ, चर्माइन पनि भान्साको लागि उपयुक्त छ जससँग ठूला भाँडा, भुन्ने प्यानहरू, र थालहरू सफा गर्नको लागि छन्। पुल-डाउन स्प्रेयरले मिक्सलाई सुविधाजनक र शक्तिशाली तरीकाको रूपमा कडा मेसेहरू तोड्न थप गर्दछ।
१०. मटेयो एकल-ह्याण्डल किचनको नल
यो Mateo एकल ह्यान्डल किचन नल फिचर-फुल नल हो जुन एक पछि अर्को सम्पत्ति हुन्छ। उच्च-टेक सुविधा र एक चिकना, आधुनिक डिजाइन बीच, यो नल कुनै पनि समकालीन वा आधुनिक भान्साको लागि उपयुक्त छ।
टचक्लिन स्प्रे नोजलहरू
आर्कटिक स्टेनलेस, कालो स्टेनलेस, क्रोम, र भेनिटियन कांस्य फिनिशमा उपलब्ध छन्
म्याटो नलले आधुनिक नलको प्रत्येक पक्षको प्रतीक बनाउँछ। एकको लागि, डिजाइन सरल र सीधा अझै सुन्दर छ, र यसले एकल ह्यान्डल स्थापना समायोजित गर्दछ। यसको माथि, नल उन्नत सुविधाहरूले भरिएको छ यसलाई अधिक व्यावहारिक र कार्यात्मक बनाउनको लागि।
शिल्डस्प्रे ™ टेक्नोलोजी यी सुविधाहरू मध्ये सब भन्दा बाहिर खडा छ। यस नवीन डेल्टा सिर्जनाले पानीको शक्तिशाली अझै कम स्प्लाश वा नो स्प्लेश प्रवाह उत्पादन गर्दछ, तपाईंलाई आफुलाई वा तपाईंको भान्छालाई प्रक्रियामा भिजाइन बिना कडा मेसेजबाट मुक्त हुन दिनुहुन्छ।
११. एडिसन एकल-ह्याण्डल किचन सिंक नल
यदि तपाईं आफ्नो भान्साको नलको लागि एक अद्वितीय र घुमावदार दृश्य चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई डिजाईन मनपर्दछ एडिसन एकल-ह्याण्डल किचन सिंक नल 9192-AR-DST। अवश्य पनि, त्यहाँ प्रेम गर्न को लागी धेरै अपरेटिंग सुविधाहरू छन्।
कसैले पनि एडिसनलाई सूक्ष्म भएको आरोप लगाउन सक्दैन। यस नललाई घर सजावट एक्सेंट टुक्राको रूपमा सोच्नुहोस् जुन उत्कृष्ट नल सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ। एडिसनसँग स्टाइलिश डिजाईन मात्र होईन तर यो विशेष गरी अग्लो नल हो।
विश्वसनीय डेल्टा नल गुणवत्ताको शीर्षमा, एडिसनले शिल्डस्प्रे ™ टेक्नोलोजी समावेश गर्दछ तपाईंलाई कम स्प्लेटरको साथ बलियो स्प्रेइing शक्ति दिन। फुटबलको उल्लेखनीय १०..10.34-ईन्च पहुँच र यसको अग्लो उचाइले तपाईंलाई सि you्कमा ठूला भाँडा र अन्य जटिल वस्तुहरू नेभिगेट गर्न क्षमता दिन्छ।
तपाईंको डेल्टा किचन सिंक नल छनौट गर्दै
माथिका सबै भान्साका नलहरुसँग उनीहरूको पक्ष र विपक्ष हुन्छ। जब यो तल आउँदछ, यद्यपि, ती मध्ये कुनै पनि दुबै शैली र प्रकार्यमा तपाइँको भान्छामा ठूलो थप गर्दछ।
अघिल्लो :: डेल्टा स्नान نل अर्को: डेल्टा स्नान نل
2021 / 05 / 13 1210
2021 / 02 / 04 809
2021 / 02 / 03 832
2021 / 02 / 03 903
2021 / 01 / 28 1906